कसरी आफ्नो पतिलाई ईर्ष्या बनाउन र हराउन डराउनु?
यदि एक महिलाले पारिवारिक भावनाको आगोलाई अचम्मको रूपमा सानो तेलको भित्तामा छिर्न चाहान्छ भने, उनीहरूलाई कम से कम चाहिन्छ - मनोवैज्ञानिकले सुझाव दिएका छनौटहरू अध्ययन गरिसकेपछि, आफ्नो पतिलाई ईर्ष्या गर्न।
अर्को - कसरी उनको पति ईर्ष्या बनाउन र हराउन डराउनुको बारेमा केही सुझावहरू।
पति कसरी ईर्ष्या गर्ने - एक मनोवैज्ञानिक सल्लाह
सुरुवातका लागि, तपाईंले यसलाई छोड्नु पर्दछ। नियमको रूपमा, पुरुषहरूले चाँडै तथ्यलाई प्रयोग गर्दछन् कि पत्नी पहिलो फोन कलमा उपलब्ध छ। तर तपाईं त्यसबाट कलहरूको जवाफ दिन सक्नुहुन्न, जसरी, कल सुनेको थिएन र सम्भव थियो।
उपस्थितिको बारेमा नबिर्सनुहोस्। मेकअप अप सम्भव भए - यो राम्रो छ प्रयोग गर्न को लागी राम्रो छ। निस्सन्देह, हानिकारक पतिले यस्तो प्रश्न गर्नेछ: "तिमी यो किन देखिरहेका छौं?" र यदि यस्तो प्रश्न सोधिएको छ भने, त्यसपछि जवाफ धेरै सरल हुनेछ - यो केवल उहाँका लागि हो। तर वैसे पनि, यस कदमले ईर्ष्या बढाउनेछ, किनकी यस्तो विवरणले उहाँलाई पनि विश्वस्त गर्दैन। यदि महिलाको उपस्थिति असीमित छ भने, पुरुष उसलाई हेर्नेछ, र यो उनको पतिले आफ्नी श्रीमतीको गर्व गर्नुपर्ने अनि आवश्यक छ, र विवेकमानीको पछि लाग्दा ईर्ष्या महसुस गरेन, तर आफैलाई "यो मेरी स्त्री हो" भनेर पकडाइयो।
यदि आवश्यक छ भने, फूलहरू गुलाबको साथ घर आउनुहोस्। अथवा उसलाई आफैं महिलाको अनुरोधमा घर ल्याउन अनुमति दिने हो (बेशक, यस क्रमको पति, वा ग्राहकको पहिचान थाहा हुँदैन)। सम्भावित प्रशंसकहरूको मात्र सोच्दा पतिले आफ्नो पतिलाई महिलाको लागि केही राम्रो बनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ। उहाँले ईर्ष्या हुनेछ।
एक चलचित्र सँगै हेर्दा, यो स्क्रिनमा अभिनेताले तपाईंलाई धेरै मनपर्छ, यो तपाईं र पृथ्वीको किनारामा एक साथ छोड्न एक वाक्यांश छोड्न वांछनीय छ। तर यो थाहा छ कि एक व्यक्ति सम्भवतः एक धेरै प्रसिद्ध अभिनेता को लागि आफ्नो पत्नी (जस्तै सैद्धांतिक रूप मा) छोडन को लागी छैन।
र अन्तमा - पूर्व पतिलाई कसरी ईर्ष्या बनाउन कसरी सम्भवतया सबैभन्दा आकर्षक सल्लाह। यदि पतिले तपाईबाट पहिले नै भाग लिनुभएको छ भने, केही घटनामा देखा पर्दछ, जहाँ त्यो उपस्थित छ, सज्जन संग। त्यसोभए तपाईं पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि यदि अझै पनि एक महिलाको भावना छ। आखिर, यस अवस्थामा, एक पुरुष अझै पनि एक महिलालाई माया गर्नाले शायद केहि गर्न सक्छ।
उनको पति कसरी ईर्ष्या बनाउन र कदर गर्नुहुन्छ?
विशेषज्ञहरूले यो पुष्टि गर्छन् कि, यदि पुरुषले सम्बन्धलाई हतोत्साहित गरेन भने, त्यो परिस्थितिबाट बच्न जसले आफ्नी श्रीमतीसँग सम्बन्धको खतरालाई धम्की दिन्छ। तर त्यहाँ एक "तर" त्यहाँ छ। उनीहरुबाट बच्न सकेन, उहाँले यो बेहोश गर्दछ। र यहाँ उहाँ खुल्ला कुरा भन्नु भनेको महत्त्वपूर्ण हो। थप - कसरी गर्ने भन्ने केहि रहस्य छ कि कुनै व्यक्तिले के गरेको छ खोएको डर छ।
पहिलोमा यो नियन्त्रण कम गर्नु हो। विस्तारै सोध्नु आवश्यक छैन कि तिनले समय बिताए, जहाँ उनी थिए। यो आवश्यक र समय-समय पर नजीवनव्याट छैन, यस अवस्थामा उनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिन आवश्यक छ, जसले उनीहरूको सराहना गर्दछ र माया गर्छ।
यो आफ्नो शौक लिन को लागि शुरू गर्न को लागी लायक छ, सामान्य रुचिहरु को बारे मा सोचना। यदि एङ्गलर हो भने महिलाले तिनीसँग माछा मार्न आवश्यक छैन। तर तपाईलाई आवश्यक पर्दा माछा माछाको केहि जानकारी थाहा पाउनुहोस्। अनि यो मान्छेले यो चासो निश्चित गर्नेछ।
तपाईंको पति कसरी जलन बनाउनुहुन्छ - पुरुषहरूबाट सल्लाह
माथिको सबै भन्दा माथि, तपाईंले जोडाले अलग खर्च गर्दछ समयको निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यदि त्यहाँ त्यहाँ छैन भने, यो तालिकामा थप गर्न लायक छ। यो समय सहयोगीहरूले एक-अर्कालाई आराम गर्न मद्दत गर्नेछन्।
आफ्नो पतिलाई यस्ता प्रश्नहरू जस्तै निरन्तरता नदिनुहोस्: "कल कसले आराम गर्यो?" उहाँले आफैलाई बताउनुहुन्छ कि उसले यो सम्भव छ। यस्तो अवस्थामा, एक महिला एक समान तरिकामा कार्य गर्न सक्छ।
उसलाई मनपर्ने अध्ययनहरूमा उहाँलाई समावेश नगर्नुहोस्। उदाहरणका लागि - पसलहरूमा संयुक्त चक्र। आखिर, यदि तपाईं आफैले आफ्नो स्थानमा कल्पना गर्नुहुन्छ, त्यसपछि महिलालाई स्पेयर पार्ट्सको लागि स्टोरमा यात्रा पनि यो मनन गर्न सम्भव छैन।
हतियारको रूपमा आफ्नो आफ्नै ईर्ष्याको प्रदर्शन प्रयोग नगर्नुहोला, यदि उनले अर्को महिलालाई हेरे तापनि, यो सम्झनाको लायक छ कि प्रायः प्राय यो हुन्छ। आफ्नो सान्त्वनाको लागी, तपाईं ब्यक्तिगत मानिसहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
यी एउटै विकल्पहरू र सुझावहरू पुरुषहरूलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ जसले पतिलाई पत्नीको ईर्ष्या कसरी बनाउने भनेर सोच्न सक्छ।
पुरुषहरु महिलाहरु को बारे मा के गर्छन?
कस्तो प्रकारका महिलाहरु पुरुष जस्तै छन्?
एक महिलाको कामुकता
हिर्काउने को हो?
विवाहित मान्छे संग एक उपन्यास - मनोविज्ञान
ईर्ष्यालाई कसरी रोक्न?
रूबीसँग रिंग गर्नुहोस्
ब्रोंकी - लक्षणहरु को क्यान्सर
फ्लोर कोट कोट हैंडर
ऊर्जा पिशाच - कसरी पहिचान र सुरक्षा गर्ने?
फंगस मशरूम - अनुप्रयोग
विमानमा उडान गर्ने डर
"कार्बनिक स्क्यान्डल": ब्रान्ड उत्पादहरू जेसिका अल्बलाई स्वास्थ्यको रूपमा खतरनाक रूपमा चिनिन्छन्
आफ्नै हातले बुना भयो कपडा
सुरुवात चरणमा भेदभावको खतरामा Dyufaston
ब्राड पिट ट्रिपल सडक दुर्घटनाको अपराधी बन्यो
महिला मोकोसेन्स सबैभन्दा फैशनेबल मोडेल र रङ हुन्, र उनीहरूलाई के लगाउने?
तोताको सेक्स कसरी निर्धारण गर्ने?
पारदर्शी अनुहार पाउडर
पीडा खुट्टा - के गर्न को लागी?
सेतो ढोका एउटा चिन्ह हो
सबैभन्दा लोकप्रिय कुकुर प्रजातिहरू
महिला प्यान्ट - 2016 मा फैशन प्रवृत्त
Olga Freimut - जीवनी
लारीन्गाइटिस नेबुलिजर - ड्रग्सको साथ साँघुरो